एक्स्पोमा ‘काष्ठ र हस्तकला’ - Pradesh Today
Homebreaking-newsएक्स्पोमा ‘काष्ठ र हस्तकला’
तुलसीपुर, १२ फागुन । स्टलको एकछेउ काष्ठकलाले भरिएको छ भने अर्को छेउ हस्तकलाले । जहाँ विभिन्न समुदायका धार्मिक, साँस्कृतिक र जातीय पहिचान झल्कने थरीथरीका सामग्रीहरू सजाएर राखिएका छन् ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन र संस्कृति प्रदर्शनका लागि स्टलमा राखेका काष्ठकला र हस्तकलाले सबैलाई आफूतिर केन्द्रित गरेको छ भने एक्स्पोलाई समेत थप आकर्षित बनाएको छ ।
प्रदेश नं. ५ अर्को प्रदेश सरकारले हालसम्म भए गरेका गतिविधि र उपलब्धिको बारेमा जानकारी गराउनका लागि फागुन १० गते शनिबारदेखि दाङको बेल्झुण्डीमा प्रदेश एक्स्पो सञ्चालन गरेको छ ।
एक्स्पोका अवसरमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन र संस्कृति झल्काउन काठबाट र माटोबाट बनेका विभिन्न सामग्रीहरू प्रदर्शनका लागि राखिएका छन् ।
जसमा कुमाल, थारू, गुरूङ, नेवार, क्षेत्रीलगायत विभिन्न १६ जातजातिको पहिचान झल्कने आकर्षक मूर्ति, भेषभूषा, माटोबाट बनेका भाँडाहरू रहेका छन् ।
काष्ठकला र हस्तकला विभिन्न समुदायको परम्परागत भेषभूषा, धर्म, संस्कृति र जातीय पहिचान भएकाले प्रदर्शनका लागि राखिएको एमबी काष्ठकला तथा हस्तकला उद्योग सञ्चालक मोहन विक्रम च्याँठले बताए ।
‘एक्स्पो हेर्न आउने धेरैजसो व्यक्तिहरूले काष्ठकला र हस्तकला सामग्रीहरूको बारेमा बुझ्ने गर्नुभएको छ’ उनले भने– ‘कलात्मक सामग्रीहरूलाई मन पराएर कसैले त अर्डरसमेत दिनुभएको छ ।’
कतिपय सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुभन्दा त्यसको बारेमा जानकारी लिन बढी आवश्यक हुने भएकाले काष्ठला र हस्तकला सामग्रीहरूलाई प्रदर्शनका लागि राखिएको उनको भनाइ छ ।
हरेक समुदायको पहिचान विभिन्न क्षेत्रसँग जोडिएको बताउँदै उनले कला, संस्कृतिको संरक्षणका लागि पनि काष्ठकला र हस्तकलाले ठूलो भूमिका खेलेको बताए ।
स्टलमा काठबाट बनेका आँखी झ्याल, आकर्षक ढोका, मन्दिर, ॐ, मादल, गौतम बुद्धको मूर्ति, ठेकी, देवीदेवताका मूर्ति, विरूपाक्षको मूर्ति, ढिकी जाँतोलगायत विभिन्न सामग्रीहरू राखिएका छन् ।
यस्तै गुन्द्री, ढकिया, मुढा, विभिन्न जाति तथा समुदायका परम्परागत भेषभूषा लगायतका अन्य सामग्रीहरूसमेत रहेका छन् ।
यस्तै माटोबाट बनेका गाग्री, कप, हुक्का, लोटा, पानस, दियो, विभिन्न समुदायका मानिसहरूको मूर्तिलगायत अन्य कलात्मक दृश्यहरूले एक्स्पोलाई थप प्रभाव पारेको छ ।
माटोका भाँडाहरू कुमाल समुदायले बनाउने गरेको भएपनि बुटवल तथा काठमाडौँका विभिन्न उद्योगबाट उक्त सामग्रीहरू दाङ ल्याईएको च्याँठले बताए ।
उनका अनुसार स्टलमा ३ सयदेखि २ लाखसम्म सामग्रीहरू राखिएका छन् । एक्स्पोमार्फत प्रदेश नं. ५ को कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संस्कृतिको विकासमा टेवा पुग्ने उनले बताए ।
फागुन १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने एक्स्पोमा प्रदेशका १२ जिल्लाको मौलिक कला संस्कृति, मौलिक ज्ञान, सीप, कृषि उत्पादन, परम्परागत खाना, भेषभूषा, स्थानीय सामग्री, आधुनिक कृषि प्रविधि तथा औजार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न पूर्वाधारसँग जोडिएका नवीनतम सामग्रीहरू प्रदर्शनका लागि राखिएको छ ।
दाङको बेलझुण्डीमा मिनी सरकार बनेको छ । प्रदेशको मिनी सरकार स्थापना भएको छ । प्रदेश सरकारको आयोजनामा सञ्चालन भएको प्रदेश एक्स्पोमा प्रदेशको मिनी सरकार स्थापना भएको छ । प्रदेशका सात मन्त्रालयका सम्पूर्ण काम कारवाही, गतिवधिको एक्स्पोमा राखिएको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा सरकारले गरेका कामको प्रचारप्रसार, कला, संस्कृति एवं पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै निजी क्षेत्रहरूको विकासका लागि प्रदेश एक्स्पो सञ्चालन गरिएको हो ।
एक्स्पोमा मन्त्रालयका आफ्ना स्टलहरू रहेका छन् । मुख्यमन्त्री, विभागीय मन्त्री, लेखासमितिका सभापति, प्रदेशसभा सदस्यहरू, राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको सहभागिता एक्स्पोमा रहेको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्लाका कार्यालयहरूको पनि आफ्नै स्टल छ । प्रदेशका १२ जिल्ला र १०९ स्थानीय तहको पनि स्टलहरू व्यवस्थापन गरिएका छन् ।
एक्स्पोमा सहभागी सबैलाई सरकारका कामका बारेमा जानकारीसमेत गराइने गरेको छ । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने एक्स्पोमा सबै जिल्ला, स्थानीय तहको आफ्नो कला, संस्कृति झल्कने खालको प्रस्तुति देखाइएको छ ।
तीन दिनमा प्रदेश सरकारले गरेका सम्पूर्ण विवरण नागरिकले पाउने र आर्थिक समृद्धिका लागि गर्न सकिने उपायका बारेमा खोजी गरिनेछ ।’